माओवादी महाधिवेशन : प्रचण्ड-देउवाको आपसी प्रशंसादेखि एमालेको पछुतोसम्म - Khula Patra
माओवादी महाधिवेशन : प्रचण्ड-देउवाको आपसी प्रशंसादेखि एमालेको पछुतोसम्म
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष ११, २०७८
प्रकाशित समय: २१:५९:०२
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशन अन्तर्गत उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम समापन भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थिति विभिन्न दलका नेताहरूले माओवादी महाधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।
यसका साथै राष्ट्रिय मुद्दामा समेत नेताहरूले चर्चा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्षले आपसी प्रशंशा गरेको कार्यक्रममा माओवादी नेता मातृका यादवले नेकपा एकता कायम गर्न नसकेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश मात्र व्यक्त गरेनन्, पुस्तान्तरणप्रति व्यंग्यवाणसम्म प्रहार गरेका थिए।
उद्घाटन सत्रको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूलाई नै चिरफार गरेको बताए।
‘हामीले गर्न खोजेको आत्मसमीक्षा नै हो। शान्तिप्रक्रियामा आएपछि कहाँ चुक्यौ भन्ने कुरामा आत्मसमीक्षा हुनेछ। यसमा सबैभन्दा बढी मैरै आत्मसमीक्षा छ। प्रतिवेदनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छु। मैले आफैँलाई चिरफार गरेको छु,’ प्रचण्डले भने।
महाधिवेशनले सबैलाई उत्प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गरी नेकपा बनाएर आफूहरूले गल्ती नगरेको दाबी गरेका थिए।
‘पार्टी एकता गरेर हामीले गल्ती थिएनौँ। फेरि एकपटक आत्मसमीक्षा गरौँ। हामीले गल्ती गरेका थिएनौँ,’ उनले भने। सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि प्रशंशा गरेका थिए। यसअघि शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डको प्रशंशा गरेका थिए।
महाधिवेशनमा छलफल हुने विषयवस्तुबारे पनि उनले जानकारी गराएका थिए। समाजवाद र पुँजीवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका कुरा गर्ने उनको र नयाँ शिराबाट निष्कर्ष दिने कोसिस हुने उनको भनाइ छ। विकास र समाजवादलगायतका विषयमा नेपाल कहाँ छ भन्नेबारे पनि विस्तारमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो। यस्तै
विज्ञान/प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरणका साथै डिजिटलाइजेसनबारे समीक्षा गर्दै समाजवादसँगको सम्बन्धबारे चर्चा हुने उनको भनाइ थियो। पार्टीको राजनीतिक विकास र कार्यदिशा र समाजवादोन्मुख समृद्धिको चर्चा गर्दै सबैको हक अधिकार संरक्षण गर्ने कार्यनीति समेत गरेको उनको भनाइ थियो। यस्तै पर्यावरणीय विषयबारे पनि बहस हुने उनको भनाइ थियो।
‘एमसीसी राष्ट्रघाती भन्या छ भन्या छ, पहिला पढ्नुपरो क्या!’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘एमसीसी राष्ट्रघाती भनेको हुनाले मैले एउटा कुरा बोल्नै पर्‍यो। राष्ट्रघाती भन्या छ, भन्या छ। पढ्या छ कि छैन थाहा छैन, पहिला पढ्नुपरो,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। नेपालको खिलाफमा किन जाउँला म? किन राष्ट्रघाती काम र सन्धि गरुलाँ म? तपाईंहरू सबै पढ्नुहोस्।’
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले बनेको पाँच दलको गठबन्धन कसैको विरुद्धमा नबनाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले मनपरी संसद् विघटन गर्ने कदमविरुद्ध आफूहरु एक भएको बताएका थिए। ‘अहिलेको गठबन्धन कसैको विरुद्धमा बनाइएको होइन। मन लाग्यो कि संसद् विघटन गरिहाल्‍ने कदम र प्रवृतिविरुद्ध हामी एक भएका हौं,’ उनले भने।
प्रचण्डको अगुवाइमा नै संविधानसभामा गएको र मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्‍त्री देउवाले थपे, ‘मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। संविधानसभामा जानुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले नै अगुवाइ गर्नुभएको हो।’
प्रधानमन्‍त्री देउवाले अहिलेको संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु एक ठाउँमा उभिनेसमेत बताए। संविधान बनाउन प्रचण्डको भूमिका निकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रशंसासमेत गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने समेत बताए। भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुँ, राष्ट्रहित विपरीत काम गर्छु र? एमसीसीको विरोध गर्नेहरुले सम्झौता पढेका छन् कि छैनन् भन्‍ने शंका लागेको छ।’
उनले माओवादीको महाधिवेशन सफलताको शुभकामना पनि दिए। उनले भने, ‘माओवादीको यो महाधिवेशन निकै महत्वपूर्ण छ। सहमति हुनु राम्रो कुरा हो। अर्काको पार्टीमा धेरै जान्‍ने हुने कुरा छैन।’
समृद्धिका लागि एकता
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देश र जनताका लागि अझै दलीय एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। विचार र एजेण्डा फरक भए पनि देश र जनताका लागि अझै दलीय एकता आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
कानुन र विधिको पालना गरेर अघि बढेमा देश समृद्धि हुने भन्दै उनले नेता विधि र कानुनमा बाँधिन नचाहने भएकाले अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए।
राष्ट्रियताको सवालमा विमति राख्नुनपर्ने भन्दै उनले कुनै व्यक्ति र वंशको तानाशाही अस्वीकार्य रहेको बताए । व्यक्ति र वंशको तानाशाहीसँग जुधेर लोकतन्त्र ल्याएको भन्दै उनले सबैप्रति सम्मान भाव राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
अत्याचार, असमानता, विभेद अन्त्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष नेपालले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने बताए।
‘कुराले मात्र जनताको मन जित्न सकिँदैन। काम गरेर देखाउनुपर्छ। यसका लागि दलहरुबीच, नेताहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
संसदभित्र र संसद बाहिर रहेका दल र बुद्धिजीविहरुबीच छलफल चलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका उनले अन्यथा देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताए।
सक्षम जनशक्ति र साधनस्रोत भएमा देशको समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै उनले भ्रष्टाचार अन्त्य नगरेसम्म देशको समृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने बताए।
देश र जनताको समस्याकाबारेमा नेताहरूको ध्यान जानुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले पुस्तान्तरणप्रति व्यंग्य प्रहार गरेका छन्। देउवाको नाम लिँदै उनले पुस्तान्तरणप्रति विश्वास नभएको उल्लेख गरेका हुन्।
‘अहिले चलेको छ के पुस्तान्तरण। स्थापित नेताहरूलाई पाखा लगाइदिने, युवालाई नेतृत्व दिने। यो कुरा गर्ने बित्तिकै देउवाजी खुशी भइहाल्नुहुन्छ। केही नजान्नेहरुलाई नेता बनाइदिने। हामीले त सबै अभ्यास गर्‍योँ। तर पुस्तान्तरणले मात्र केही हुँदैन,’ यादवले भने, ‘स्थापितलाई हटाएर नयाँ ल्याउने शैली पुँजीवादी शैली हो।’
उनले सामाजिक अन्तरविरोधलाई बुझेका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा रहनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘मुख्य कुरा के हो भने सामाजिक अन्तरविरोधलाई कसले बुझ्यो र हल गर्ने बाटो कसले दियो भन्नेले क्रान्तिको बाटो तय गर्छ। त्यसैले फेस र एजले हुँदैन,’ उनको भनाइ छ।
क्रान्तिलाई बीचमै छोड्न नपाइने भन्दै उनले प्रचण्डको विकल्प पार्टीमा नरहेको संकेत गरे। ‘धर पाइन्छ? धर पाइदैन। क्रान्तिलाई बीचमा छोडेर कोही गएको छ र? अवसरवादी मात्र त्यसरी जान्छ। क्रान्तिकारी त्यो हुन्छ जो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि गइरहन्छ,’ यादवको भनाइ छ।
नेता यादवले ओलीकै कारण नेकता एकता टिक्न नसकेको समेत आरोप लगाएका थिए।
नेकपा नजोगिएकोमा एमालेलाई पछुतो
नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो लागेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा महासचिव पोखरेलले एकता जोगिन नसकेको भन्दै पछुतो व्यक्त गरेका हुन्।
‘एमाले र माओवादी एकीकरण गर्ने सोच सही थियो, तर विभिन्न कारणले एकता जोगिएन। एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो छ,’ उनले भने, ‘अहिले वामपन्थी आन्दोलन सही बाटोमा हिँडिरहेको छैन। अब नयाँ सोच, नयाँ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ।’
अहिलेसम्म वामपन्थी दलहरू अधिकारका मामिलामा राम्रो गरेर अघि बढेको भए पनि त्यसपछि गर्नुपर्ने कार्यमा चुकेको उनको भनाइ थियो। अब नेताहरूको अन्तर कलहका आधारमा नीति बनाउन नहुने उनले बताए।
उपलब्धि धरापमा परेको आशंका
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने राजनीतिक उपलब्धिहरू धरापमा पर्न थालेको बताएका थिए। उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी नै धरापमा पर्न थालेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उल्लेख गरेका थिए।
राजनीतिक उपलब्धि रक्षाका लागि संविधान संशोधन र परिमार्जन अतिआवश्यक भएको भन्दै उनले अबको सरकारले अघिल्लो सरकारको गल्ती कमजोरी बताएर मात्र नभएर सबैको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
संघीयता, समावेशी र गणतन्त्रको विकल्प हुनै नसक्ने बताएका उनले संसदमा अवरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए। माओवादी सशस्त्र युद्ध र यसको जगमा भएको मधेश विद्रोहले गणतन्त्र ल्याएको उनको भनाइ छ।
संघीयता र समावेशिताको अनुभूति भएन
कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता अनिलकुमार झाले संघीयता र समावेशीको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। संविधानमा गणतन्त्रको विषय समेटिएको भए पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी संघीयता र समावेशीको एजेन्डा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
मधेस आन्दोलन संघीयताकै लागि भएपनि अहिलेसम्म जनताले अनुभुति गर्न नपाएको बताएका उनले संघीयता र समावेशीको एजेन्डाका लागि जीवन दाउमा राखेर माओवादी क्रान्तिमा होमिएको भए पनि अहिले त्यसलाई सम्बोधन गराउन चुकेको आरोप लगाए।
‘गणतन्त्र, समावेशी, संघीयताका लागि माओवादी क्रान्तिमा होमियो। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्यौँ,’ उनले भने, ‘तर, गणतन्त्र संविधानमा समावेश भए पनि संघीयता र समावेशीबारे उठाइएको एजेन्डा अहिलेसम्म सम्बोधन भएन।’ यी माग सम्बोधन गर्ने गरी माओवादी अधिवेशनले निर्णय लिने उनको अपेक्षा थियो।
प्रतिगमन अन्त्य गर्न एकता
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले प्रतिगमन अन्त्यका लागि विभिन्न दलबीचको एकता आवश्यक रहेको बताएकी छन्। प्रतिगमनकारी शक्ति पनि सक्रिय रहेको र यसको अन्त्यका लागि सबै दलहरूबीचको एकता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘अहिले पनि प्रतिगमन शक्ति सक्रिय छ। हामीहरूबीच मतभेद रहेको भए पनि प्रतिगमन अन्त्यका लागि दलहरूबीचको एकता आवश्यक छ,’ उनले भनिन्।
राष्ट्रियताका लागि दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। राष्ट्रियताको रक्षा र एमसीसीलगायतका विषयमा माओवादीले उचित निर्णय लिने अपेक्षा गरेको उनले बताइन्।
माओवादीको आठौं महाधिवेशन अन्तर्गत जारी उद्घाटन सत्रमा विभिन्न दलका नेताहरुले शुभकामना मन्तव्य दिने क्रम जारी छ।
पार्टी एकताको प्रस्ताव
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी एकताका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोहले तय गरेका एजेन्डा स्थापित गराउनेदेखि एमसीसी खारेज गर्ने निर्णय गर्न माग गरेका छन्।
‘माओवादी जनक्रान्तिले तय गरेका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर्ने निर्णय गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘यी निर्णय भयो भने माओवादी एकताका लागि छलफल गर्ने बाटो खुल्नेछ।’
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले विभिन्न चरणमा भएको राजनीतिक आन्दोलन प्रयोगशालामा सीमित हुन नहुने बताएका छन्।
आन्दोलनलाई प्रयोगशाला बनाउन हुन्न
उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था नफेरिएको बताएका थिए। उनले राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रयोगशालामा मात्र सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिए।
आफ्नो सम्बोधनका अधिकांश समय माओवादीप्रति जनताले निकै प्रश्न उठाएको र यसको नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बताएका उनले घुमाउरो शैलीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनका क्रममा जनतामाझ गरिएको वाचा पूरा नहुनुको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्रियता बलियो बनाउन लागौँ’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नवनिर्वाचित महामन्त्री कुन्ती शाहीले विचार र वादभन्दा बढी राष्ट्रियता बलियो बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
‘विचार र वाद फरक हुन सक्छ तर राष्ट्र बनाउने कुरामा मतभेद हुनहुँदैन। वाद र विचार तिर होइन राष्ट्रियता बलियो बनाउन लागौँ,’ उनले थपिन्, ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमा जुटौँ।’
जनतालाई अधिकार सम्मपन्न बनाउनका लागि र युवालाई आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण बनाउन माओवादी महाधिवेशन सफल होस् भन्ने उनले शुभकामना व्यक्त गरिन्।